ချစ်ကြည်အေး: ၂၀၁၁ ဟောစာတမ်း
Anonymous Fri Jan 14, 11:58:00 AM GMT+8
အင်း.. ထားဦးမှပဲ စိတ်ကောင်းလေးဘာလေး :P
ညီမလေး Fri Jan 14, 12:06:00 PM GMT+8
ညီမလေး Fri Jan 14, 12:07:00 PM GMT+8
ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်အောင် လုပ်နိူင်ဖို့ ကြိုးစားပါ့မယ် လို့ပိုဖြစ်သင့်တယ်ထင်တယ်နော်း)
Kay Fri Jan 14, 01:34:00 PM GMT+8
၂၀၁၁ မှာ.. အသက် တနှစ် ကြီးမယ်.. ( တိန် )း)
ချစ်ကြည်အေး Fri Jan 14, 01:47:00 PM GMT+8
တွန်တွန်...ဒါပေါ့ မွေးကို မွေးရဦးမှာ...စိတ်ကောင်း ပြောပါတယ် :)
ညီမလေး ဟုတ်တယ် အားထုတ်ရမယ် ပြည့်ပါစေနဲ့တင် မရဘူး :)
ကေ...တိန် တွေ ခေတ်စားနေတယ် ဟိဟိ....:P
ဆုမြတ်မိုး Fri Jan 14, 02:01:00 PM GMT+8
သမီးတော့ ဗေဒင်လုံးမ၀ယုံဘူး အပိုတွေ
စိတ်ကောင်းရှိ သီလမြဲ ၀ိပသနာစွဲရင် အကုန်အဆင်ပြေမှာပါ ....။
သက်ဝေ Fri Jan 14, 02:23:00 PM GMT+8
ဟောစာတမ်း ထုတ်လိုက်အုံးမယ်... ဟဲဟဲ
ချစ်ချစ်တယောက် နေ့ခင်းကြောင်တောင်ကြီးမှာ ပိုစ့်အသစ်တင်ပြီး ကော်မန့်တွေ ပြန်နေတယ်ဆိုတော့ မဟုတ်မှလွဲရော...
ချစ်ကြည်အေး Fri Jan 14, 02:56:00 PM GMT+8
မှန်ပါတယ်ကွယ် ညီမလေး ဆုမြတ်က တမှတ်...:)
ညီမလေး သက်ဝေ မှားပါတယ်ကွယ်...တို့ ရုံးမှာပါ တကယ်...အဟုတ်...:P
An Asian Tour Operator Fri Jan 14, 03:58:00 PM GMT+8
ခရီးက ပြန်ရောက်တာ မကြာသေးဘူး။ အလုပ်တွေ ပုံနေတယ်။ ရုံးမှာ ရှင်းရမယ့် အလုပ်တွေ အများကြီးပဲ။ ဘောစ်က လဲ လျာထားချက် မှီအောင် လုပ်ဖို့ ခဏခဏ သတိပေးနေတယ်။ ဒီကြားထဲ ရတဲ့ အချိန်ကလေး လုပြီး ဘလောဂင်း နိုင်သေးတယ်။ (တယ်ခက်တဲ့ငါဘဲ)
ကိုယ့်ကိုယ် ကို ပြောပါတယ်။ ဘယ်တူ့ကိုမှ မချိုလိုပါဝူး :P
မိုးယံ Fri Jan 14, 04:05:00 PM GMT+8
မိုးယံ Fri Jan 14, 04:07:00 PM GMT+8
2011 မှာတိုင်းပြည် အင်အားရှိမယ်... လူတွေ မှိုင်းတိုက်ခံရမယ်.. သာနာ မှေးမှိန်အောင်လုပ်မယ့်လူတွေပေါမယ်.. မိုးယံ တစ်ကောင် ဆက်လက်ပေါမယ်... မ ချစ်ကြည် အလုပ်ထဲမှာ ခိုး ဂင်းမယ်... ဂွီ။
သိင်္ဂါကျော် Fri Jan 14, 04:08:00 PM GMT+8
၂၀၁၁ မှာ အဆိုးတွေ ဝေးပြီး အကောင်းတွေပဲ ကြုံပါစေ..
ချစ်ကြည်အေး Fri Jan 14, 04:23:00 PM GMT+8
ဟားဟားဟား ရယ်ရတယ် ကိုသောမတ်စ် လူကို လာနောက်နေတယ်.....။ နိူးပရော်ဗလန်ပါ...တို့များက မာလတီတတ်စ်စကာ ဟက်ဟက် :P
မိုးယံ...ဟယ်...ရေးပြီးသားလေး အချောသတ် တင်မိတာပါအေ... ပိတ်သတ်ကြီး ဖတ်စေချင်လွန်းလို့ မအားတဲ့ကြားက ခိုး ဂင်းရတာပါ နားလည်ပေးပါ ပိတ်သတ်ကြီးရယ်...:)
ညီမဂါဂါ ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါရစေနော်....:)
ZZZ Fri Jan 14, 04:32:00 PM GMT+8
အမလေးတစ်ယောက် ရုံးမှာအလုပ်ပါးနေတယ်လို. ဟောလိုက်မယ် ၊ ရုံးကနေ ကွန်မန်.တွေ ရေးနိုင်လို. ခွိခွိ
Anonymous Fri Jan 14, 05:24:00 PM GMT+8
အမချစ်တို့ ဟောခန်းဖွင့်လို့ရပြီ ဘုရားကြီးမှာ ဆိုင်ဖွင့်ကြစို့
ဗေဒင်ဆြာချစ်ပေါ့ နေရာကောင်းလေးရထားတော့ အဆင်တွေပြေချက်ဗျာ လူတိုင်းစိတ်စေတနာကောင်းရှိရင် ကံကောင်းခြင်းတွေ ရှိမှာပါ
rose of sharon Fri Jan 14, 06:23:00 PM GMT+8
ဗေဒင်မယုံပေမဲ့ Magazine တွေထဲပါတဲ့ ဟောစာတမ်းအတိုလေးတွေတော့ အပျော်လျှောက်ဖတ်ဖြစ်တယ်.... လွဲတာများတယ်... ကိုယ်တိုင်ကမယုံလို့ထင်ရဲ့ :)
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) Fri Jan 14, 08:03:00 PM GMT+8
ခေါင်းစဉ်ဖတ်ပြီး အစ်မချစ်များ ဗေဒင်ဟောနေသလားလို့
မှန်ရင် ညီမအတွက်ပါ ဟောခိုင်းမလုိ့ပါဆို။။
တွေ့တဲ့သူတိုင်းက ပိုက်ဆံချေးပေးချင်စိတ်ပေါ်လာတဲ့ ယတြာလေးရှိရင် မ စပါ အစ်မရယ်..
ပိုက်ဆံတွေ အများကြီးရရင် ပြန်မဆပ်ဘဲ ထွက်ပြေးမလို့ ဟိဟိ
အစ်မ လက်ဝှေ့ပွဲလုပ်ဖြစ်ရင် အကြောင်းကြားနော် သတင်းနဲ့ ဓာတ်ပုံလာယူမလို့း)
ကိုအောင်(ပျူနိုင်ငံ) Sat Jan 15, 12:20:00 AM GMT+8
ဘေးဘရာတွေ ကင်းဝေအောင် ဘရာကြော်ရောင်းတဲ့ ကုလားဆီ
က ဘရာကြော်သုတ် အကြွေးဝယ်စားထားလိုက်မယ် အမ ...
ကိုဇော် Sat Jan 15, 02:24:00 AM GMT+8
မှန်ပါ့ အစ်မရာ။ ဗေဒင် ဆိုတာကိုလည်း ကျနော်က ဒီလိုပဲ ခံယူထားတာပါ။
ယုံတာ မယုံတာ အသာထားပေါ့။
“ တစ်ပိုင်တစ်နိုင် သာသနာပြုရအောင်။ ရဝေနွယ်-အင်းမ ”
ရေးတဲ့ စာလေး ဆိုရင် အရမ်းကို တန်ဖိုး ရှိတာပါ။ အခုလိုပဲ ကံအကြောင်းကို ဖွင့်ဆိုပြထားတာပါ။ အင်း . . . .
ဒါနဲ့ ဧည့်ခန်းမှာ လက်ဝှေ့ကြိုးဝိုင်း ဆောက်ရင် ပြောဦးနော်။
ဒိုင်လုပ်ချင်လို့ပါ ( မိုက်တိုင်ဆန် လိုပေါ့ ဟဲဟဲ )
Anonymous Sat Jan 15, 11:56:00 AM GMT+8
ကြာကြာစံရအောင် တတိုင်းပြည်လုံး ကို ကြာဇံကျော် ကြွေးမယ်တဲ့
ရွှေရတုမှတ်တမ်း Sat Jan 15, 01:04:00 PM GMT+8
ဗေဒင်ပညာကို တကယ့်လေ့လာကြည့်ရင် တကယ်စိတ်ဝင်းစားဖို့ကောင်းတယ်..
ဗမာပြည်မှာက ပညာလေးမတောက်တခေါက်တတ်ပြီး ဆရာအမည်ခံကလုပ်စားတွေများနေတာ့ ဗေဒင်ပညာခမြာ နာမည်ပျက်ရတာ..
ဒါပေမဲ့ မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်က ဒီပညာကို အကြွင်းမဲ့ ပုံမယုံကြည်ဖို့ ဆုံးမခဲ့တယ်..သိဒ္ဓတ္ထမင်းသားဖွားတော်မူစဉ်က အရှငိကေဏ္ဍည အလောင်းအလျာ ပုဏ္ဏားလေးက လက်ညှိုးတချောင်းပဲထောင်ပြီး ဘုရားစင်စစ် ဧကန်ဖြစ်မယ်လို့ ဟောခဲ့တာပဲ..ပညာရပ်တခုကို ကိုယ်မသိပဲ မတတ်ပဲ မယုံဘူးလို့ ရမ်းမပြောသင့်ဘူး..
ချစ်ကြည်အေး Sat Jan 15, 06:14:00 PM GMT+8
ကိုZ>>>ဟုတ်ပါ့ အလုပ်က ပါး ဂျာကြီးက မရှိ....ဆိုတော့....:P
ဆီစိမ်>>> ကြာသလားလို့ ဘုရားကြီးမှာ တခန်း ယူလိုက်လေ...
အတော်ဆိုးတဲ့ မချော ကောင်းတာတွေ လုပ်ပါ ဆိုမှ ငွေတွေဘုန်းပြီး ပြေးချင်သေးတယ် သူက...:)
ကိုအောင်...သွားစားရင် ငါ့လည်းခေါ်ဦး ဟိဟိ :)
မောင်ဇော် ခေါ်မယ်လေ မိုက်တိုင်စန်လိုတော့ နားရွက်သုတ် မစားကြေး...:)
အမရွှေဇင် ကြာဇံကြော်နဲ့ သနပ် စားကြတာပေါ့ သရက်သီးတို့ မရမ်းသီးသနပ်တို့ ပြောပါတယ်...:)
ဟုတ်တယ် ကိုကြီးကျောက် ပညာက ကောင်းရက်နဲ့ လူတွေဖျက်နေတာ...:)
ဝက်ဝံလေး Sat Jan 15, 09:10:00 PM GMT+8
များကိုလဲ ဟောပေးပါ မမချစ် ခစ်ခစ်
pandora Sat Jan 15, 11:42:00 PM GMT+8
၂၀၁၁မှာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်အကိုင်တွေရော ကိုယ်ဝါသနာပါရာတွေကိုပါ ကျန်းမာရွှင်လန်းစွာ အေးအေးချမ်းချမ်း ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
အင်ကြင်းသန့် Sun Jan 16, 12:16:00 AM GMT+8
ဂျင်းလည်း ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ဗေဒင်တွေ လက္ခဏာတွေကို မယုံတတ်ခဲ့ဘူး....လူတစ်ယောက်ရဲ့ကံက သူ့ရဲ့လုပ်ရပ်နဲ့ စိတ်စေတနာပေါ်မူတည်ပြီးအချိန်မရွေးပြောင်းလဲနေတတ်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကိုလုံးဝ လက်ခံထားတယ်။း))
မေသိမ့်သိမ့် ကျော် Sun Jan 16, 11:30:00 AM GMT+8
မမရေ လာလည်သွားပါတယ်။ ဟောစာတမ်းဖတ်ပြီး ပြုံးစိစိဖြစ်သွားပါကြောင်း...